Naasnuujinta, Naasnuujinta baraxtiran iyo Quudinta aan Dabiiciga aheyn | Somali Health
Home Warar Naasnuujinta, Naasnuujinta baraxtiran iyo Quudinta aan Dabiiciga aheyn
Naasnuujinta, Naasnuujinta baraxtiran iyo Quudinta aan Dabiiciga aheyn
Naasnuujinta, waa qaab ilmaha dhashay lagu quudinaayo caano ka yimaada naaska hooyada.
Naasnuujinta baraxtiran/gaarka ah, waa in ilmuhu nuugo caanaha naaska kaliya iyadoo loo raacin waxyaabo kale, sida; biyo, cunto ama caano kale oo aan naaska ahayn muddo lix (6) billood ee ugu horreeya noloshooda. Sidoo kale, liix (6) bil ka dib marka naasnuujinta la soconayso cuntada illaa labo (2) sano, waxaana loo yaqaanaa naasnuuijnta qeybta ah.
Haddaba, qaabka ugu fiican haddane baabaadada leh uu cunuga loo quudiyo waa; Naasnuujinta baraxtiran/gaarka ah”.
QUUDINTA AAN DABIICIGA AHEYN
Quudinta aan dabiiciga aheyn, waa quudinta ilmaha la quudiyo cunto ama biyo aan aheyn caanaha naaska ayadoo da’da ilmaha aan gaarin lix bilood, waayo waqitigaas uu ilmaha yar waxa u baahaynaay ”Naasnuujinta baraxtiran ama gaarka ah”.
Ururka Caafimaadka adduunka WHO iyo sanduuqa badbaadada carruurta UNICEF waxa ay sheegeen, in hal malyan iyo bar carruur ah ay sanad kasta dunida ugu dhintaan hooyada oo aan naaskeeda nuujin darted, inteeda badana ay ka dhalato carruurta oo la siiyo caanaha gasacadeysan iyo kuwa kale sida; caanaha lo’da, arigga laguna siiyo basaasadda oo ay adagtahay in si fiican loo nadiifiyo. Sidaas darteed, waxaa halis ah in loo bilaabo cunta kasta ama cabitaan ka hor ilmaha aan gaarin lix bilood..
Haddabe, hadii hooyada ee u bilaawdo cunto ama cabitaan ilmaha yar ka hore lix (6) bilood waxaa dhacda dhibaatooyin badan, ey ka mid yihiin:
Wasaq iyo Infekshinka oo ku badan quudinta aan dabiiciga aheyn, gaar ahaan marka ee hooyada isticmaaho basaasada, waayo Basaasada wee adagtahay in la nadiifiyo waxayna u baahantahay karkarin ka dib quudinkasta. Carruurta la siiyo quudinta aan dabiiciga aheyn, shubanka badanaa waxa uu ku yahay joogto, badanaa waxuu sababaa nafaqodarro.
Walxaha nafaqada leh aa isku dheeri tirneyn. Tusaale: Fitamiin qaar ayaa ka maqan caanaha lo’da waxaa laga yaabaa in aysan ku jrin fitamiin ku filan cunugga, gaar ahaan fitamiin C. Dhinaca kale, macdanta birta ah ee laga helo caanaha lo’da ma nuugi karro mandhicirka ilamaha sida macnadanta birta ee laga helo caanaha naaska. Sidaas owgeed, quudinta aan dabiiciga aheyn badana waxay sabataa ‘Dhiig la’aanta yaaranshaha macdanta birta’. Inkastoo warshadaha badanaa ee ku daraan macdanta birta caanaha si laga hortago yaraanshaah macdanta birta.
Duxda iyo boratiin aan ku habooneyn:- Caanaha qaar waxaa ku jira dux buuxda marka lala barbardhigo caanaha naaska. Sidaas owgeed, si loo helo koriimo caafimaad leh cunugga waxuu u baahanyahay dux aan buuxin halka caanaha qaar eysan ku jirin qaar ka mid ah duxda kuwaaso muhim u ah koriinka maskaxda.
Burburin la’aan, caanaha gasaceysan ama kuwa kale wee adagtahay in la dheefshiido, waayo malahan dhecaamada ku shaqada leh dheefshiidka duxda, isla markaana caanaha lo’da si tartiib ah ayaa loo dheefshiidaa. Sidaas owgeed waqti badan ayey caloosha ku jiraaan marka lala barbardhigo caanaha naaska. Hahdaba cunuuga si dedeg ah uma baahanaayo, ka dibne saxarada cunuga waxay noqotaa mid adag ama ku dhegan. Caanaha lo’ada waxaa ku jirra borotiin aad u badan. Xubinta killida ee cunnuga yar oo ah mid aan qaan-gaarin aad ayey ugu adagatahay in ay qashin saarto, inkastoo shaqaalaha caafimaadka aya hooyooyinga kula taliyaan in ey baraxdo caanaha si loo yareeyo boratiinga.
Xasaasiyada; ilmaha lagu quudiyo caanaha lo’da waxaa badana lagu arkaa xasaasiyad sida neefta, iyo cuduro kale.
Dhibaatooyinga nuugidda; ilmaha la baray in ay nuugaan basaasada wee ku adagatayaa in ay nuugaan naaska. Sidaas owgeed, ugu dambeyn wee diiddaan labada quudin.
Quudinta dhameystiran, waa cuntada ama dareeraha la siiyo ilmaha ayadoo la socoto naasnuujinta. Xilliga quudinta dhameystiran, cuntada ilmaha yar waxay noqotaa mid isbadasha waayo ilmaha yar markii hore waxuu qaadan jiray caanaha naaska kaliya balse, hadda waxuu la qaadanayaa cuntada qoyska. Sidaas owgeed, billowga quudinta dhamystiran waa waqtiga isbddel ku imaanaya xiriirga adaga ee u dhaxeeya hooyada iyo ilamaha, midkaasoo bilowday waqtigaa uurka.
Horudhaca quudinta dhameystiran waa waqti halsi u leh ilmaha yar waayo waxaa korarta infekshinka, sabab u tahay isbeddelka cuntada, laga soo bilaawo caanaha naas oo nadiifka ah oo ey ku jiraan walxo ka hortaga infekshinka iyo hadda oo cuntada lagu quudiyo badana lagu diyaariyo, keydiyo oo laguna quudiyo qalab aan nadiif aheyn. Nafaqodarrada waxay aad u badan tahay xilligaan kala-guurka sababtoo ah qoysaska badan ma fahansana baahida qaaska ah ee ilmaha yar, haddane aqoon u malahan sida loo diyaariyo ama loo wajaho naas ka joojinta si loo siiyo ilmaha cunto dheeri tiran oo nafaqaysan.
Koormee loo Bilowdaa cuntada caruurta.
Caanaha naaska kaliya ayey carruurta u baahanyihiin ilaa lix (6) billood ee da’dooda. Haddaba lix (6) billood ka dib, caanaha hooyada kuma filna ilmaha yar oo waxay u baahan yihiin cunta kale in lagu caawiyo ayadoo aan la joojin naasnuujinta waayo carruurta caanaha naaska waxay ka hellaan sadex meelood meel tamarta iyo nafaqada uu ilamaha yar u baahan yahay lixda bil hore ka dib.
Haddaba, celcelis ahaan da’da ilmaha yar u baahanyahay in lagu billaawo cuntada waa; lixda bilood hore ka dib ayadoo la siinaayo labo (2) waqti maalintii oo cunto ah. Ka dibne u kordhi cuntada ee gaarsii ilaa saddex waqti, waayo inta u dhaxeysa da’da lix (6) illaa siddeed (8) billood ilmaha yar badana aad ayee u baahanyihiin waxa uuna rabaa in uu cunno wax badan uu cunto ah.
Qaar ka mid hooyooyinga ma siiyaan carruurta cunto kale illaa hal (1) sano da’dooda ka gaaraan. Haddii goor dambe loo billaawo ilmaha cuntada waxay sababtaa nafaqadarro, waxayna dhibaato ku noqoneysaa in carruurta ay bartaan cuntada. Sidoo kale, da’da sagaal (9) ilaa iyo toban (10) carruurta badanaa wee ash-ash badan yihiin, mana doonayaan cuntada ku cusub, marka haddii hooyada ee sugto ilaa ilmaha gaaraan sagaal (9) ama toban (10) billood waxay kala kulmeysaa dhibaato si ay u barto cuntada.
Toddobaadka Naasnuujinta Adduunka 1 – 7da Agoosto.
Previous articleToddobaadka Naasnuujinta Adduunka 1 – 7da Agoosto.
Next articleCudurka Gawracatada (Diphtheria)